Wararka - Tilmaamaha hawlgalka iyo keydinta aminoguanidine bicarbonate
Tilmaamaha hawlgalka iyo kaydinta aminoguanidine bicarbonate
Aminoguanidine bicarbonate waa kiimiko sun ah, sidaa darteed waxay leedahay shuruudo gaar ah keydinta caadiga ah. Waa lagama maarmaan in la keydiyo si loo hubiyo badbaadada alaabada iyo shaqaalaha. Waa kuwan taxaddarrada kaydinta qaarkood ee ay tahay inaad barato.
1. Waa in lagu keydiyaa meel qabow oo hawo leh, maxaa yeelay aminoguanidine bicarbonate waa mid aan degganeyn markii la kululeeyo. Marka heerkulku ka sarreeyo 50 ℃, wuxuu bilaabi doonaa inuu burburo, taas oo saameyn ku yeelan doonta waxqabadka isticmaalkeeda. Sidaa darteed, fiiro gaar ah u yeelo xakamaynta heerkulka iyo huurka bakhaarka.
2. Aminoguanidine bicarbonate waa sun. Waa in lagu keydiyaa bakhaar gaar ah oo leh astaamo digniino nabadgelyo leh, oo aan dadku isticmaali karin markay doonaan.
3. Shaqo fiican ka samee maaraynta maalinlaha ah, qaado oo isticmaal aminoguanidine bicarbonate waa in lagu keydiyaa diiwan wanaagsan, si looga hortago in alaabtu lumaan ama si aan kala sooc lahayn loo isticmaalo.
Sidaa darteed, inta lagu guda jiro keydinta aminoguanidine bicarbonate, arrimaha kor ku xusan waa in fiiro gaar ah la siiyaa, si loo xaqiijiyo amniga.
Aminoguanidine bicarbonate waa in fiiro gaar ah la siiyaa habka isticmaalka, maxaa yeelay waa kiimiko sun ah. Isticmaalka saxda ahi wuxuu xaqiijin karaa nabadgelyada hawlwadeennada. Waa kuwan waxyaabo ka mid ah hawlgallada amniga ee ay tahay inaad barato ka hor intaadan isticmaalin aminoguanidine bicarbonate.
1. Markaad isticmaaleyso aminoguanidine bicarbonate, hawlwadeenadu waa inay fiiro gaar ah u yeeshaan ilaalinta amniga. Ka fogow taabashada tooska ah ee aminoguanidine bicarbonate indhaha iyo maqaarka, haddii kale waxay dhaawac weyn u geysan doontaa jirka.
2. Fiiro gaar ah u yeelo ka hortagga daadashada iyo ka hortagga qulqulka, oo fiiro gaar ah u yeelo inaadan aminoguanidine bicarbonate u gelin bulaacada, haddii kale waxay nijaasayn doontaa ilaha biyaha.
3. Kahor iyo kadib isticmaalka aminoguanidine bicarbonate, si taxaddar leh u isticmaal galoofisyada gacmo gashi ee la isticmaalay. Xayawaanku waa inay fiiro gaar ah u yeeshaan jeermiska.
Erey ahaan, isticmaalka aminoguanidine bicarbonate waa mid aad u qaas ah. Kaliya markii si sax ah loo isticmaalo ayay amaan noqon kartaa.